Qari Sawirada on iPhone Gacanta ama isticmaal Top 5 Apps
Iyadoo dhalashada ee technology, dadka isticmaala iPhone hadda hayn karaa ay content telefoonka la ilaaliyo mar walba. Ilaalinta ee baahida gaarka ah maskaxda ku isticmaala ', shirkadaha ayaa bilaabay dhowr barnaamijyadooda iPhone oo loo isticmaali karo in ay sii xogta gaarka loo leeyahay si qarsoodi ah.
Chine Kuwani, muhiimad ku darayaa lakabka dheeraad ah oo ammaanka si iPhone iyo hubiyo macluumaadka in loola jeedo in ay si qarsoodi ah si dhab ah weli la ilaaliyo. Waxaa jira siyaabo dhawr ah oo qarinaya sawiro ku saabsan iPhone leh ama aan lahayn isticmaalaya barnaamijyadooda ka. Waxaad iyaga oo dhan isku dayi kartaa oo qaado mid ka mid ah in aad ugu jeceshahay.
Qaybta 1. Sida loo Gacanta qari Photos on iPhone
Qaybta 2. 5 Best iPhone Apps in qari Photos
Qaybta 1. Sida loo Gacanta qari Photos on iPhone- 'Dalag' Images
Haddii aad rabto in aad ka fogaato ka kaaftoomi koobiyaynta sawiro la isticmaalayo wax codsiyada kale ee badbaadinta iyo ama qabaa laga yaabaa in aadan awoodin in ay wax Xusuusan password ka dhigay wixii codsiyada, hoos ku xusan waa habka ugu fudud ee aad u badbaadin photos saxda ah gudahood aad iPhone.
Talaabada 1: Tag Photo Album in aad iPhone oo guji si uu u furo oo aan arko sawirada gudahood. Next, dooro image ah in aad jeclaan lahayd inaad ku dhuumato.
Talaabada 2: Guji Edit> Dalag in la yareeyo ama noola image asalka.
Talaabada 3: Waxaad dareemi doonto gacanka ku geesood oo sanduuqa. Jiid oo la yareeyo, si ay u muujinaysaa oo keliya meel aad u yar oo ah sawirka. Guji "Save 'si loo badbaadiyo badhanka ay yaryihiin.
Ka dib markii image ku yaryihiin ayaa la badbaadiyey, qof Author telefoonka oo keliya arki doonaa qayb ka mid ah sawirka, laakiin ma awoodi doonaan in ay arkaan image dhameystiran.
Fiiro gaar ah: Si aad ugu laaban image ku yaryihiin in size asalka ama si aad u eegto sawirka oo dhan, guji si ay sawir ka furo, guji Edit> 'faqa Original'.
Dhowr barnaamijyadooda iPhone ayaa dalab, jidaynayey dadka isticmaala si ay u sii photos waxay Qarin gudahood telefoonka. Hoos ku xusan ka mid ah barnaamijyadooda iPhone ugu caansan oo loo isticmaali karo in aad sawirradaada haysato qarsoon yihiin:
1) Private Photo yiri-
Tani waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ugu gaarka loo leeyahay sawirka barnaamijyadooda shaqeeya yaab ah ee iPhone iyo iPad. Waxay u baahan tahay sirta ah si aad u hesho in Photo yiri- by khaanada habayn.
App wuxuu taageeraa labada qufulka dhibic iyo qufulka password. Waxay awood u isticmaala in ay xirto iyo maarayn photos in aad rabto in aad sii gaar ah ama si qarsoodi ah. Hoos ku xusan waa tallaabooyinka si aad ku gaarto.
Talaabada 1: . Dooro sawir ah in aad u baahan tahay si ay u qariyaan Talaabada 2: Marka dheer haya sawirka, waxay waayi doonaa isla markaana uu aado folder 'Private' gudahood Photo yiri-.
Hadda, haddii qof eegaa folder camera ah sawirka diyaar ma noqon doono sidii ay ku maqan.
Fiiro gaar ah: Si aad sawirka soo celiyo ama u sameeyo dadweynaha mar kale, u tag Photo yiri- by khaanada habayn, u tag folder gaarka ah iyo saxaafadda dheer sawirka aad rabto in aad dadweynaha.
2) My Folder Secret
My Folder Secret waa app weyn oo kaa caawin karaa inaad sii xijiyaan aad sida sawirrada gaarka ah oo u ogolaanaya in aad ku darto habayn ah. Codsiga waxaa loo isticmaali karaa badbaadinayo macluumaad kasta sida sawirada, xiriirada, qoraalo, videos, clips, heeso iyo xitaa filimada.
Codsiga waxaa kale oo ay bixisaa feature dheeraad ah oo kuu sheegaysa haddii uu qof isku dayay in uu helo sawiro gaarka loo leeyahay, laakiin kor ku dhamaaday galaya habayn qaldan. App ayaa sidoo kale ka qaadi doonaan sawir iyo badbaadin ah ee aad taleefan si aad u ogaato oo ku saabsan dhacdada. Cool, miyaanay ahayn?
Tallaabada 1: Soo gal 'My Secret Folder' adigoo isticmaalaya habayn. Tallaabada 2: From waxaa helaan album sawir iPhone ee ay doortaan sawirka aad rabto in aad soo dejinta inay Secret Folder. Riix si loo doorto sawirka oo la dhaqaajin doonaa si Secret Folder.
Photos ayaa u dhaqaaqay sidan aan diyaar u noqon doona arkaysid qof.
3) Ka dhig Safe
Ka dhig Safe waa app xor ah u saamaxaya kuwa isticmaala iPhone si aad u qariso sawirrada ay ka daalacashada aan joogtada ahayn marmar ay telefoonka. Waxaa mar kale waa app weyn oo aan u ogolaan inay helaan aad sawiro ku maqan iyadoo la isticmaalayo pin 4 lambar ah ama password.
Ka dhig Safe kale oo uu leeyahay feature loo qaato sawiro iyada oo la isticmaalo app, in kiiska user ay rabto in ay si toos ah sawirka ku biiro Hayso Safe. App waxa uu yimid iyadoo camera gaar ah, si aad u qaadan kartaa sawir isticmaalaya Hayso app Safe iyo sawirka badbaadin si toos ah app gudaha. Sidaas waxa badbaadiyay dadaal iyo waqti ku qaatay in dhaqaaqin sawirada liiska camera iPhone ay ku dhig Safe waayo, waxaa iyaga ku dhuumanayaan.
Talaabada 1: . Logon in Hayso Safe isticmaalaya pin ilaalinta aad Talaabada 2: Waxaa la go'aamiyey dooro sawiro aad rabto inaad ku dhuumato. Tallaabada 3: Riix 'qarin' iyo sawirada la qarin doonaa folder camera ah.
Fiiro gaar ah: Si aad u unhide sawirada, jaraa'id 'Unhide ee hoose ee interface ka.
SpyCalc u ogolaanaya kaydinta sanamyada ama sawiro hoos lakabka ah ee ah calculator Raadinta fudud. Sida magacaba ka muuqata, SpyCalc waa calculator shaqaynaysa. Laakiin codsiga soo bandhigay sawiro kaliya marka user galo password saxda ah.
Inkasta oo ay u saamaxdo photos in la dhaqaajiyo si codsigan ka Photolibrary, SpyCalc sidoo kale u ogolaataa darajo siinta iyo diyaarinta sawirada saas isu raadinta fudud.
Talaabada 1: . Download SpyCalc in aad iPhone Tallaabada 2: U tag 'Settings "SpyCalc oo shid Website doorasho. Tallaabada 3: Isticmaalka browser ah, gasho iPhone. Tallaabada 4: Next, aad 'Dooro Files' kara iyo waxa ay geliyaan ama 'Jiid iyo dhibic' files si ay u geliyaan galay SpyCalc.
Si kale oo fudud ku qariyaan sawiro iyo iyaga dareysa sirta ah waa adigoo isticmaalaya DropBox. Hoos ku xusan yihiin tallaabooyinka ay arrintaas:
Talaabada 1: . Go'aan ka dooro photos in aad jeclaan lahayd in la ilaaliyo ama qarin Talaabada 2: . sawiradii soo xulay codsiga camera in WordPress ka dhaqaaq ah Talaabada 3: Next, ay doortaan in ay ku dar 4 lambar password / habayn si ay u sameeyaan DropBox ah app password ilaaliyo.
Photos qarsoon isticmaalayo habkan oo aysan furi karin iyada oo aan la isticmaalayo password saxda ah, sidaas dhigaysa sawiro aad qarsoon oo nabad ah.
Iyada oo ah hababka kor ku xusan, hadda isticmaala iPhone nasan karaa iyo aw, in sawiro ku saabsan iPhone ku qarsoonna oo ma la heli doonaa si ay dadka kale u arkaysid xitaa ay dhacdo in shil maaraynta iyo Author telefoonka.
Sida loo dayactir A naafada Iphone
> Resource > iPhone > Sida loo qari Photos on iPhone